शुभ शर्माका दुई लघुकथा - Lekhapadhi लघुकथा : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
शुभ शर्माका दुई लघुकथा
लेखक : लेखापढी ५ असार २०७८, शनिबार १९:३७ मा प्रकाशित
“काका, आज फणिन्द्र आउने भनेका होइनन् ? म तल घुम्तिसम्म लिन हिँडे है ।”
तिलकका कुरा सुनेर भित्रैबाट होमनाथ काका कराए, “बाबु, पढेर त्यत्रो ठूलो विद्वान भएर फर्किएको मेरो छोरोको भव्य स्वागत गरेस् है । भक्तेलाई भनेर पन्चेबाजा लिएर आइज ।”
होमनाथ काकाले पनि छोरोको चरण छोएर आशीर्वाद लिएको कुरो तिलकलाई मन परेन ।
एकैछिनमा गाउँका केही व्यक्ति तल चौतारीसम्म झरे । उनको आगमन भयो । नाचगान भयो । हर्षोल्लासका साथ उनको स्वागत भयो । सबैले चरण छोए । होमनाथ काकाले पनि छोरोको चरण छोएर आशीर्वाद लिएको कुरो तिलकलाई मन परेन । ऊ नजिक गयो । साथीको लवजमै कुरा गर्यो तर फणिन्द्रले आँखा तर्न भ्यायो । उसले लख काट्यो, निकै अंहकार चढेको रहेछ, घमण्डको डिग्री बोकेर आएको रहेछ । त्यसपछि उसले साथी फणिन्द्रलाई वास्ता गर्न छोड्यो ।
केही दिनपछि गाउँकै कुनै सामूहिक जमघटमा दुवै जनाको फेरि भेट भयो । गाउँलेहरू सबैले तिलकलाई साथ दिँदै थिए । फणिन्द्रको बानीबेहोरा मन नपरेको बताउँदै थिए । उसलाई लाग्यो, यो सबै तिलककै करामत हो । आफ्नो मानहानी भएको ठान्यो । उसलाई असह्य भयो । ऊ भेटेर कुरा गर्न उसको घर नै पुग्यो तर तिलक घरमा थिएन।उसकी आमाले सुकुल बिछ्याइदिइन् । ऊ बसेन । आमाले भन्नुभयो, “फणिन्द्र महाराज ! किन पाउकष्ट गर्नु भयो हाम्रो घरमा ?”
आक्रोसित मुद्रामा उसले गुनासो पोख्यो, “होइन आमा ! तपाईँको छोरोलाई कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने राम्रो ज्ञान रहेनछ कि ? फेरि त्यो किन त्यस्तो हँ ? ती गाउँलेहरूलाई म विरूद्ध किन भड्काएको त्यसले ?”
बिरामीले सिकिस्त भएका गाउँको माथ्लाघरे काकालाई बोकेर तिलक स्वास्थ्य चौकीतिर हानिँदै थियो ।
उनीहरू कुरा गरिरहेका थिए । उसैबेला एउटा दृश्य देखियो । बिरामीले सिकिस्त भएका गाउँको माथ्लाघरे काकालाई बोकेर तिलक स्वास्थ्य चौकीतिर हानिँदै थियो ।
बूढीआमा मुसुक्क मुस्कुराइन् र भनिन्, “बाबु ! हजुरले निकै मेहनत गरेर वेद पढेर आउनुभयो तर तिलकले गाउँघरको वेदना पढ्यो ।” भन्दै उतैतिर दौडिन् ।
शकुन्तला निराश मुद्रामा देखिन्छे, आजकल खै के भयो ? एकोहोरो टोलाउँछे । उफ् ! गरेर सुस्केरा काढ्छे घरीघरी ।
“के भयो शकु ? जतिबेला पनि टोलाउँछेस् त किन ? कतै चक्कर चलेको छ कि क्या हो ।” उर्मिलाले शङ्काको भावमा साथीलाई सोधी ।
“नकरा तँ, चल्यो चक्कर…? यो समाज देखेर रिङटा चल्यो नि बरू ।” उसले झनक्क रिसाउँदै भनी र अर्कैतिर हिँडी ।
छोरीको अवस्था देखेर शान्तिले श्रीमतीसँग चिन्ता व्यक्त गरिन्, “शकु त एक्लै फतफताउँछे तर कसैसँग केही भन्दिन । एकान्तमा बस्न रुचाउँछे । यसो गर्दागर्दै ऊ प्राय ः एक्लै टोलाउने भएकी छे । कतै लागोभागो पो हो कि ? कसैले बिगार्दिन लागेका पो हुन् की ?”
बूढालाई भने उनको कुरामा खासै चासो र विश्वास लागेन । उनले लापरवाह भएर भने, “केही भएको छैन । तैंले टाउकोमा चढाएर बिग्रेकी हो ।” यति भनेर उनी जुरूक्क उठेर हिँडे ।
आमाको मन किन मान्थ्यो र ? एकदिन नजिकैको ठूला पण्डितलाई उनले सबै कुरा बताइन् । सतर्क गराउँदै पण्डितले भने, “धामीझाँक्रीको चक्करमा नलाग्नू, बरू छोरीलाई यहाँ पठाउनुस् , म सम्झाउने छु ।” उनको मनमा थोरै आशा पलायो । पण्डितले भनेझैँ उनले छोरीलाई उनकै घर पठाइन् ।
फेरि बाटोमा मासुको लागि घिसार्दै गरेको बूढी भैंसीलाई देखाएर भने, “त्यो भैसीले हिजोसम्म दूध दिन्थ्यो । अब बेत बस्यो ।”
उनले शकुलाई फूलको बागमा बोलाए । ऊ डराइडराइ गई । वागमा एउटा माली सुकेको बिरुवा उखेल्दै फाल्दै गर्दै थियो । पातहरूले रूखहरूलाई छाडेको दृश्य देखाए । फेरि बाटोमा मासुको लागि घिसार्दै गरेको बूढी भैंसीलाई देखाएर भने, “त्यो भैसीले हिजोसम्म दूध दिन्थ्यो । अब बेत बस्यो ।”
उसले केही पनि बुझिन् । झर्किदै भनी “ह्या ! पण्डित बा बुझ्ने गरी भन्नु न, के हो ? मैले त केही बुझिनँ ।”
उनले निधार खुम्च्याई ।
उनी नजिकै गए । छेउमा बस्न भने । प्रेमको चक्करमा केटी एकान्तप्रेमी बनेको लख काटे र सम्झाउँदै भन्नथाले, “हेर नानु ! यहाँ कसैको भरोसा छैन । सबै मान्छेहरू स्वार्थी छन् । व्यक्तिलाई होइन, समाजका लागि केही गर् । जसले तिमीलाई सदैव जीवित राख्नेछ ।”
(शुभ शर्मा समकालीन नेपाली लघुकथा लेखनका क्षेत्रमा सक्रिय लघुकथा सर्जक हुनुहुन्छ । उहाँ लघुकथाको प्रवद्र्धनका लागि लघुकथाको लाइभ वाचन कार्यमा समेत सक्रिय हुनुुहुन्छ ।)
प्रभादेवी पौडेलका दुई लघुकथा—अनुभूत, सन्तान
नेपाली साहित्य समाज, क्यानडाको लघुकथा परिणाम घोषणा
लता केसीका दुई लघुकथा
लघुकथा प्रतिष्ठान, पोखराको आयोजनामा लघुकथा गोष्ठी